Home News Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo farin adag u diray Ururka Al Shabaab
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo farin adag u diray Ururka Al Shabaab
Taliska Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka xilliggaan ay waddaan dagaallo kala duwan oo ay kula jiraan dagaalyahanada Al-Shabaab ee ku sugan Soomaaliya.
Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Daahir Aadan Cilmi Indhoqarshe ayaa warbaahinta u sheegay in Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin in ay Al-Shabaab ay ka saaraan degaanada ay wali gacanta ku hayaan.
Waxaa uu ugu baaqay Shabaab in ay dagaalka ay joojiyaan, maadaama waxa dagaallada ku dhimanaya ay yihiin dad Soomaaliyeed.
Indhoqarshe ayaa sheegay in aysan jirin xilliggaan sabab loo dilo dadka Soomaaliyeed oo ay heystaan dhibaatooyin kala duwan.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu sheegay in uu waddo howlgalo Ballaaran oo ka dhan ah Shabaab.
Previous articleCiidankii Baydhabo la geeyay oo qaar ka mid ah ay hubkoodii iibsaday
Next articleKhilaaf xooggan oo soo kala dhex-galay Madaxda ugu sareysa Puntland
Wasiirada Gal-mudug oo fariimo Hanjabaad ah u diray Villa Soomaaliya (Aqriso...
Dowladda Britain oo lagu dhaliilay qaabka ay u wajahday fataahadda England